Mangahazo - Wikipedia
Ny mangahazo na kazaha na kajaha na balahazo na mahôgo dia zavamaniry amin’ ny faritra mafana, avy any Amerika. Toy ny hazo kely maniry ny mangahazo ka mety mahatratra 240 sm ny haavony miala amin’ ny tany. Miloko mavo manopy maitso ny voniny. Ny halavan’ ny fakany, izay fihinana (atao hoe vodiny).
1 Fiavian’ ny mangahazo sy karazany
1.1 Fiavian’ ny mangahazo
1.2 Karazana mangahazo
2 Fambolena sy fampiasana ny mangahazo
2.1 Fambolena mangahazo
2.2 Fampiasana ny mangahazo
3 Toetoetran’ ny mangahazo
Fiavian’ ny mangahazo sy karazany[hanova | hanova ny fango]
Fiavian’ ny mangahazo[hanova | hanova ny fango]
Ny mangahazo dia zavamaniry avy any amin’ ny faritra faritra manana toetanin-jana-pehin-tany any any Amerika, any Venezoela. Nentin’ ny Pôrtogey taty Afrika ny mangahazo ka avy ao izy no niely manerana ny faritra manana toetanin-jana-pehin-tany rehetra sady nihanitombo ny karazany. Niely manerana ny firenena manana toetanin-jana-pehin-tany mando na toetanim-pehiben-tany ny mangahazo taty oriana.
Karazana mangahazo[hanova | hanova ny fango]
Misy karazany 160 any ho any ny mangahazo any Amerika. Ny roa amin’ izany ihany no azo atao sakafo, dia ny mangahazo mangidy (Manihot esculenta na Manihot utilissima) izay ampiasaina indrindra amin’ ny fanamboarana koba-mangahazo (tapiôka), sy ny mangahazo mamy (Manihot dulcis na Manihot opi) izay atao sakafo toy ny legioma.
Fambolena sy fampiasana ny mangahazo[hanova | hanova ny fango]
Fambolena mangahazo[hanova | hanova ny fango]
Mpamboly mangahazo any Kôtidivoara
Tsotra ny fambolena mangahazo: atsatoka amin’ ny tany ny tahony ary avaina ny ahitra manodina azy. Ny fangadiana ny fakany (ny vodiny) dia azo atao enim-bolana aty aoriana. Maniry amin’ ny tany lemaka misy nofon-tanin’ antsanga ny mangahazo. Afaka maniry hatrany amin’ ny haambo 1 000 m izy nefa mihena noho izany ny vokatra azo. Ny firenena mpamokatra mangahazo be indrindra maneran-tany dia i Brezila, i Nizeria, i Tailandy, ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô ary i Indônezia.
Fampiasana ny mangahazo[hanova | hanova ny fango]
Vovoka mangahazo nohamainina
Ny fakan’ ny mangahazo izay miendrika varingarina dia fihinan’ ny Indianan’ i Amerika tany aloha. Azo atao sakafo koa ny raviny, indrindra rehefa voatoto (ilay antsoin’ ny Malagasy hoe ravitoto).
Anamboarana zavapisotro mahamamo atao hoe cachiri ny ranon’ ny mangahazo any Goiana any Amerika Atsimo. Ny vovoka mangahazo dia ahazoana ny atao hoe farinha izay anamboarana mofomamy. Isan’ ny foto-tsakafon’ ny olona maro any Afrika Andrefana sy aty Madagasikara ny mangahazo. Azo atao koba matsora na marihitra ny mangahazo rehefa avy nokikisana. Azo anamboarana mofo maina na nandrahoina amin’ ny eton-drano mafana koa izy. Any Brezila dia ahandroina atao ilay antsoina hoe feijoada ny koba-mangahazo afangaro tsaramaso mainty.
Toetoetran’ ny mangahazo[hanova | hanova ny fango]
Vonin' ny mangahazo azon' aretina
Mety mahatratra 240 sm ny haavon’ ny mangahazo miala amin’ ny tany. Ny halavan’ ny fakany dia mety mahatratra 91 sm ary ny sakan’ izany dia mety mahatratra 8 sm. Ny mangahazo dia misy poizina (asidra atao hoe manihôtôksinina) izay manjavona rehefa tratran’ ny hafanana mandritra ny fandrahoana azy. Ny tenan’ ny mangahazo mangidy manontolo no ahitana io poizina io, fa ny hoditry ny mangahazo mamy ihany no misy izany.
Ny mangahazo mangidy (Manihot utilissima na Manihot esculenta) dia zavamaniry misy ravina mitapelaka, misy voniny miloko mavo manopy maitso. Ny fakan’ ny mangahazo dia sakafo tsy dia tsara satria be rano sy tsy ampy prôtida sy lipida ary otrikaina (vitaminina). Be mpitady anefa ny mangahazo satria ny 30 %n’ ny lanjany dia tavolo.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Mangahazo&oldid=1000075"
Voaova farany tamin'ny 8 Janoary 2021 amin'ny 10:52 ity pejy ity.